डेंगुका बिरामी झापामा मात्रै ५ सयभन्दा बढी - BirtaJyoti
डेंगुका बिरामी झापामा मात्रै ५ सयभन्दा बढी
super userSeptember 12, 2019 8:18 am 0
बिर्तामोड । डेंगुका कारण झापासहित देशभर बिरामीहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । बिरामीको संख्या बढ्दै गए पनि झापामा स्थानीय तहले डेंगु नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम नगरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।
झापामा हालसम्म पाँच सयभन्दा बढी डेंगुका रोगी फेला परिसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका महामारी रोगका फोकल पर्सन कुलबहादुर पौडेलले जानकारी दिए । पूर्वाञ्चलसँग कुरा गर्दै पौडेलले भने–झापामा दिनप्रतिदिन बिरामीको संख्या बढिरहेको छ ।
हालसम्म बिरामीको संख्या पाँच सय नाघ्यो, यस्तै अवस्था रहे झापामा पनि संकट निम्तिन सक्छ ।
डेंगु नियन्त्रणका लागि गत वर्षसम्मका कार्यक्रम सकिए पनि यस वर्ष कुनै कार्यक्रम नआएको पौडेलको भनाइ छ । उनले स्थानीय तहले डेंगु नियन्त्रणका लागि चासो दिनुपर्ने भन्दै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग कुनै पनि नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले सहयोग नमागेको बताए ।
डेंगुका कारण झापामा हालसम्म दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यो वर्ष झापामा कसैको पनि मृत्यु नभए पनि यसरी नै बिरामीको संख्या बढ्दै गएमा भयावह अवस्थाको सिर्जना हुन सक्ने स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका पौडेलले बताए । झापामा डेंगु पहिलोपटक मेचीनगरमा फेला परेको थियो । झापाका मेचीनगर, बिर्तामोड, दमक, भद्रपुर लगायतका नगर डेंगुको जोखिममा रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । डेंगुका कारण झापाका अस्पतालहरुमा बिरामीहरुको संख्या बढ्दै गएको छ ।
यसैबीच दक्षिण एशियाभरि नै डेंगुले यतिबेला प्रकोपको रुप लिएको बताइएको छ । दक्षिण एशियाली देशका सरकार, स्वास्थ्यकर्मी तथा वैज्ञानिकहरु अब के गर्ने भनेर सोचिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
डेंगुका कारण फिलिपिन्समा सयौंको मृत्यु भइसकेको एएफपीले जनाएको छ । भियतनाममा डेंगुका विरामी तीन गुणाले वृद्धि भएको त्यहाँका अधिकारीहरुले बताएका छन् । मलेशिया, म्यानमार र कम्बोडियाका अस्पतालहरु डेंगुका बिरामीले भरिभराउ छन् ।
बढ्दो तापमान र कम प्रतिरोधात्मक क्षमताका कारण दक्षिण एशियामा डेंगुले विकराल रुप लिएको छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको भदौ २२ गतेसम्मको तथ्यांक दिँदै नेपालमा यो वर्ष ३ हजार ८ सय ९९ जना डेंगुका बिरामी देखिएको जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा वैज्ञानिकहरुले डेंगुको प्रकोपलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
वैज्ञानिकहरूको एउटा समूहले यतिबेला डेंगुको एन्टीबडी (प्रतिरोधक) को काम गर्न सक्ने किरा (बग)मा परीक्षण गरिरहेका छन् । यसले विश्वकै लागि चुनौतिको रुपमा रहेको डेंगुको सामना गर्न सक्ने वैज्ञानिकहरुले आशा लिएका छन् ।
विश्व लामखुट्टे कार्यक्रम (डब्ल्यूएमपी) ले विकास गरेको एक विधिमा एडीज एजिप्टाइ जातको भाले र पोथी लामखुट्टेलाई वोल्बाकिया नामक रोग–प्रतिरोधी ब्याक्टेरियाबाट संक्रमित गराएर वातावरणमा छोडिन्छ । डेंगुको संक्रमण लामखुट्टेको टोकाइबाट एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्छ । र, त्यस्ता लामखुट्टे भीड, तातोपना र आर्द्रता बढी रहेको स्थानमा फस्टाउँछन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थाहरुको तथ्यांक अनुसार यस बर्ष दक्षिणपूर्व एशियामा ६ लाख ७० हजार जना संक्रमित भएका छन् भने १ हजार ८ सय भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । यो पछिल्ला केही वर्षहरुकै सबैभन्दा खराब प्रकोप भएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
डेंगुको प्रकोप यो मात्रामा फैलनुमा तातो मौसम प्रमुख कारण भएको बताइएको छ । यो वर्षको जुलाई महिनालाई विश्वव्यापी रूपमा अहिलेसम्मकै तातो महिनाको रुपमा रेकर्ड गरिएको थियो । लामखुट्टेले पनि तातो मौसम नै मन पराउँछन् । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिसहरुको समूहमा पनि यो रोगले प्रकोपको रुप लिएको बताइएको छ । वोल्बाकियालाई पहिलोपटक १९२० को दशकमा हार्वर्ड युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरुले कलेजको नालीमा बस्ने लामखुट्टेमा पत्ता लगाएका थिए ।
डेंगु हरेक वर्ष विश्वभर १० करोड मानिसहरुमा फैलिने गरेको अनुमान गरिएको छ ।धेरै देशहरूले डेंगुको संक्रमण भएका स्थानहरुमा कीटनाशक राखेर फगिङ पनि गरिरहेका छन् । तर, यो विधि भने छोटो अवधिको लागि मात्रै प्रभावकारी देखिएको छ । कीटनाशक राखिएको केही दिनमै लामखुट्टे फर्किने गरेका छन् । र त्यस्ता लामखुट्टेमा रासायनिक कीटनाशकविरुद्ध प्रतिरोधको विकास समेत भएको पाइएको छ ।
यसैबीच राष्ट्रियसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने डेंगु रोगले देशभर आतङ्क सिर्जना गरेको हुँदा राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद अधिकारीले यसका विषयमा स्वास्थ्यमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै समयमै पहिचान गर्दा यो रोगबाट मर्नु पर्दैन भन्ने जनचेतना फैलाउन सरकारलाई सचेत गराए । सांसद अधिकारीले डेंगु फैलने क्रमलाई राष्ट्रिय संकटका रुपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै भने– ५६ जिल्लामा फैलिएको छ, यो रोग राष्ट्रिय महामारी हो कि होइन ? यसलाई स्वास्थ्यको संकटकाल घोषणा गर्नुपर्छ कि पर्दैन, कति मान्छे
मरेपछि यसले महामारीको रुप लिन्छ ?
डेंगु रोगको नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको कामका सम्बन्धमा स्वास्थ्यमन्त्रीको जवाफ अति जरुरी भएको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले भने– सरकार कहाँ छ ? के गर्दैछ ? यसको महामारी रोक्न सरकारले के गर्दैछ ? स्वास्थ्य मन्त्रालय, सेना र प्रहरीको भूमिका के हो ? उनले डेंगु रोग परीक्षणको नाममा निजी अस्पतालहरुले चर्को शुल्क असुलिरहेको हुँदा परीक्षण शुल्क तोक्न सरकारसँग माग गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कोमल वलीले तीन तहका सरकारले आपसमा सहकार्य गरी डेंगु रोगको नियन्त्रणमा तत्परता देखाउन ध्यानाकर्षण गराउँदै स्थिति भयावह भएको उल्लेख गरिन् । उनले जनचेतना फैलाउन र भविष्यमा हुन नदिन पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराइन् ।
बाह्रदशी जेसीजद्वारा प्रि इण्डक्सन तथा लोम अफिसर्स तालिम
बिर्तामोड । बाह्रदशी जेसीजको आयोजनामा प्रि इण्डक्सन तथा लोम अफिसर्स तालिम सम्पन्न भएको छ । बाह्रदशी जेसीजका अध्यक्ष पुष्पलाल धमलाको अध्यक्षता तथा बाह्रदशी खेलकुद ... Read More
super user- January 12, 2022
गणेश निरौला बाइसी–चौबिसी राज्यहरुमध्ये जम्मा आठवटा शाहवंशीय राजाहरुद्वारा शासित राज्यहरुमा सबैभन्दा कान्छो मात्र होइन, उपेक्षित र गरिब पहाडी राज्य गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाह जत्तिको साहसी, ... Read More
NEWER POSTबिर्तामोड नगरपालिकाले मुसहरबस्तीका ३४ विपन्न परिवारलाई घर हस्तान्तरण गर्यो
OLDER POSTबहुसंख्यक मतदाता मेरो पक्षमा छन्, मेरो जित सुनिश्चित छ : गौतम गुप्ता, अध्यक्ष पदका उमेद्वार
नेता गाउँमा, किसान चाहिँ खेतमा !
बलिउड नायिका राखी विराटनगरमा, लाइभ कन्सर्ट
यस्तो उत्साह देखियो झापामा चुनाबको